HORDHAC: Bayeren Munich VS Liverpool? xidigaha labada dhinac ka maqan , safafka macquulka ,xaqiiqooyinka ciyaarta iyo xilga la daawan doono kulanka . – Gool FM
HORDHAC: Bayeren Munich VS Liverpool? xidigaha labada dhinac ka maqan , safafka macquulka ,xaqiiqooyinka ciyaarta iyo xilga la daawan doono kulanka .
Bashiir March 13, 2019
(Europe) 13 Maarso 2019. Kooxda Bayeren Munich ayaa caawa garoonkeeda ku soo dhaweeneysa kooxda Liverpool kulanka lugta labaad ee wareega 16-ka ee tartanka Champions League .
Kulan ciyareedkii hore oo ka dhacay garoonka kooxda Liverpool ayaa ku soo dhamaday bar baro 0-0 ah wallow hadii Liverpool ay gool ku dhaliso garoonka Allianz Arena ay u tahay mid fa’aido ah madaama ay Bayer wadan gool bananka ah .
Liverpool khadkeeda dhexe ee Naby Keita ayaa seegi doona kulanka lugta labaad ee wareega 16-ka tartanka Champions League oo ay caawa la ciyaari doonaan kooxda Bayren.
Da’yarka dafaca midi ee Liverpool Trent Alexander-Arnold ayaa ku soo bilaaban doona kulakan kadib markii la saaray qeebtii dambe ciyaartii ay 4-2 ay uga adkaadeen kooxda Burnley kulan ka tirsanaa horyaalka Premier League .
James Milner ayaa dhankiisa ka soo kabsaday dhaawac ka soo gaaray muruqa waxana macquul ah in loo soo xusho khadka dhexe .
Alex Oxlade-Chamberlain oo mudo dheer ka maqnaa kooxda Liverpool ayaa dib ugu soo laabtay kooxda balse waxa uu qaadanaya taba bar isaga u gaar ah madaama uusan taam ahaanshiyo buuxa uusan heysan .
Dhica kale kooxda garoonkeeda lagu ciyaaryo ee Bayern Munich waxaa kulankan ganaax kaga maqan Joshua Kimmich iyo Thomas Muller oo kulankii hore xitaa seegay , lkn James Rodriguez ayaa qarka u saran in weerarka dhexda laga ciyaarsiiyo .
Kulanka : Bayeren Munich VS Liverpool ( Champions League )
Goobta : Allianz Arena
Goorta :11:00 oo habeenimo
68% boqolkiiba kooxaha bareejo 0-0 ku soo gala meel aan garoonkooda aheyn kulan ka tirsan tartanka Champions League heerkiisa bug baxa misane lugta labaad lagu ciyaarayo garoonkooda kooxaahaas waxa ay u gudbayeen wareega xiga 21-ka mida 31-dii dhacdo ee la soo dhaafay tartanka Champions League .
Bayern Munich ayaa badisay kalaiya hal kulan sided kulan oo ay wajahday kooxda Liverpool tartamada European , Bayer shan ka mida kulamdaas bareejo ayey galeen halka labo kulana ay qasareen , kulanka qura oo ay guusha ka gaareen kooxda Reds ayaa ahaa ciyaar dhacday November 1971 .
Munich ayaa ku guul dareesatay kaliya hal kulan in ay dhalin weydo gool 26-kii kulan ee ugu dambeyey oo ay ku ciyaarto garoonkeeda tartanka Champions League, kulankaas ayaana ahaa kulan ay wajaheen kooxda Sevilla xili ciyaareedkii hore wareega quarter-finals kulankaas ayaana ku dhamaaday (0-0).
Liverpool ayaa qasaartay afartii kulan ee la soo dhaafay oo ay ku ciyaarto meel ka baxsan garoonkeeda tartanka Champions Leageu , waxaana kulmadaas sedexda ah laga dhaliyey 9-gool halka dhankooda ay la yimaadeen sedex gool oo qura , balse marna ma dhincin in Reds laga adkaado shan kulan oo xiriir ah tartamada Yurub.
Liverpool’ kaliya waxa ay ka heysataa hal gool sedex kulan oo banaanka ay ku soo ciyaartay tartanka Champions League xili ciyaareedka , goolkaas oo rigoore ahaa waxaa u dhalieyey James Milner waxa uuna ka dhaliyey kooxda Paris St-Germain.
Juventus oo guul soo laa basho leh ka gaartay Atletico Madrid iyo Man City oo aan u axsaan falin Schalke kadiib xasuuq ay u geesteen +Sawiro
HORDHAC: Barcelona VS Lyon ? xogta kulanka iyo xaqiiqooyinka laga diwaan giliyey.